गुरु दक्षीणा | bishnunmdc
Posted on November 16, 2019 by bishnunmdc
रचना साहित्यिक पत्रिकाको पूर्णाङ्क १६२ भदौ–असोज २०७६ मा प्रकाशित संस्मरण धन्यवाद सहित साभार गरि ब्लगमा राखिएको छ ।
मैले वि.सं. २०३२ सालमा तेस्रो ब्याचको रुपमा पर्वत बिहादीको नेपाल तारा माध्यामिक विद्यालयबाट एसएलसी दिएको हुँ (बिहादी जनजीवन र भौगोलिक अवस्थितिबारे ‘गुरुका गालामा कालोमोसो’ भन्ने संस्मरणमा उल्लेख गरेको छु) । त्यसबेला जिल्ला भरको परीक्षा केन्द्र सदरमुकाम कुश्मामानै थियो । हामी दुई महिना पहिले चामल, गेडागुडी, सिरक, डसनाको बन्दोबस्त गरेर जान पर्दथ्यो । म र मेरो साथी टंक पराजुली त्यसरीनै गएका थियौँ । हामी दुवैका बुबाले बाँसको डोको भरी सामान बोकेर कुश्मा पु¥याएको सम्झदा आँखाका ढिल अहिले पनि भरिन्छन् । त्यसरी परीक्षा दिन गएर बस्ने कति साथीहरुले राम्रोसँग पढदैनथे– आमाबाको मर्म बुझ्दैनथे । कति साथभाईका आमाबाबुले त्यो खर्च जुटाउन नसकेर उनीहरुको पढाई बीचमै छुट्थ्यो ।
कति परिवारले रीण गरेर, अर्काको खेतबारीमा काम गरिदिएर खर्च जुटाई स्कुल पठाएका हुन्थे–छोराले पढेपछि ठूलो मानिस बन्छ भन्ने ठूलो भरोषा थियो । आमाबाबुको नाम र ईज्जत राख्छ , सन्तोषको सास फेर्न पाईन्छ, यहलोक र परलोक दुवै लोकमा सुखसँग बस्न पाईन्छ भन्थे । हातमा उठेका फोरा, फाटेका कुर्कुच्चा मुसार्दै छोरा पढाउने रहर पुरा गर्थे (त्यसबेला छोरीलाई पढाउने साह्रै कम हुन्थे )। मन, भावना, चाहना बिहादीको फाँटभन्दा माथि लेकमा रहेको लीसे गैराको मुलको पानीजस्तै कञ्चन थियो । त्यसबेला अहिले जस्तो अकुत सम्पत्ति कमाउछ भन्ने भन्दा इज्जत र नामलाई बढि ओजपुर्ण मानिन्थ्यो । अहिलेको समाज त्यसबेलाको तुलनामा बाहिरी आवरणमा सुखी जस्तो देखिएला तर इज्जत र संस्कारमा पहिलेको राम्रो थियो ।
२०२८ सालमा स्थापना भएको नेपाल तारा माध्यामिक विद्यालयका कोठा विद्यार्थीले नजिकको सालको बनबाट बोकेर ल्याएको उन्युले बारेर बनाईएको थियो । छानो खरले छाएको थियो । मैले एसएलसी दिए पछिका केहि वर्ष पछि सम्म पनि रातामाटाको बनमा उन्यु घारी उम्रदै, छिप्पिदै रह्यो र स्कुलका कोठा उन्युले बारिदै गए । प्रत्येक शुक्रवार हामीले उन्यु ल्याउदै थुपार्दै गर्दथ्यौँ । नयाँ कोठा थपिदै गए, पुराना मर्मत हुदै गए । नेपाल ताराबाट पहिलो पटक २०३० सालमा ६ जनाले एसएलसी परीक्षा दिए जसमा तीन जनाले पास गरे । त्यो नतिजा शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावक सबैकालागि गौरवको विषय बन्यो ।
२०३० सालमा मैले कक्षा ८ मा पढदै थिएँ । भास्तुङका नरवहादुर कुँवर, भाटीचौरका कुलबहादुर कुँवर (हामी बीच हुनुहुन्न) र म कक्षामा पहिलो, दोस्रो र तेस्रो हुन्थ्यौँ । म जेठमा हुने अर्ध–वार्षिक परीक्षामा बाहेक कक्षा १० को टेष्ट परीक्षासम्म प्रथमनै भएँ । कुलबहादुर र नरबहादुरबीच दोस्रो र तेस्रोकालागि प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो । कक्षामा सबैभन्दा कम उमेर र उचाईमा सबैभन्दा होचो म नै थिएँ, तर तुब्लो थिइनँ ।
सहपाठी बीच कक्षा कोठामा चकचक गर्ने, उन्युका सुकेका छेस्काले एकअर्कालाई घोच्ने, कलम, कपी र किताब लुकाइदिने जस्ता कुरानै मनोरञ्जनका मुख्य साधन थिए । माथिल्लो कक्षामा पढने अग्ला विद्यार्थी भलिवल खेल्थे । भलिवल चकौदेतिरको खरीखोलाको खोल्सो र भास्तुङतिरको खोल्सामा पुग्थ्यो–ससानालाई बल लिन पठाउथे । बल ल्याए पछि एक पटक लात्तले हान्न पाइन्थ्यो । म पछिल्लोमा पर्थेँ ।
काठमाडौँमा हिउँदमा हुने स्कूल बिदा त्यहाँ असार–साउनमा हुन्थ्यो । खेतिपाति लगाउने यामलाई ध्यानदिई त्यो विदा दिइएको थियो । त्यसबेला बेसाहा खानेलाई खान नपुग्ने गरीव भनेर भित्रभित्रै चर्चा गरिन्थ्यो । विहादीमा ९५ प्रतिशतलाई आफ्नो उब्जनीबाट खान पुग्थ्यो–त्यसबेला । ठूलो परिवार भएका, कम जग्गा हुनेले छिमेकीको खेतबारीमा खनजोत गरी त्यसबाट अनाज लिन्थे र वर्ष गुजार्थे । धेरैले वर्ष भरको नुनतेलको लागि अनाज बेचेर जोहो गर्थे, कम हुनेले सरसापटी, रीण वा बटौलीबाट अरुको नुन तेल बोकी ल्याईदिएर आफूलाई पनि जोहो गर्थे । नुन, मट्टीतेल र कपडाबाहेक वर्ष भर चाहिने कुरा गाउँमानै हुन्थ्यो ।
खेत, बारी, खरवारी, बनबारी हुने परिवारका बुहारी घाँस, दाउरा गर्न बन जादैनथे । गाई बाख्रा धेरै पाल्नेहरु तिनलाई चराउन बनतिर लैजान्थे र फर्कँदा घाँस–दाउरा लिएर आउथे । बर्षामा कसैलाई फुर्सद हुदैन्थ्यो । ‘खहरे खोला उर्लेर आयो, बर्षा लाग्यो बोलचालै हरायो ।’ भन्ने गीत बारीका कान्लामा धाँस काट्दै तन्देरी–तरुनी गुनगुनाउथे । परिवारका सबै सदस्य वर्ष दिन भर खानकालागि उब्जनी गर्न खेतबारीमा हुन्थे । असोजदेखि मंसिरसम्म मकै, कोदो, धान, गेढागुढी थन्क्याउन चटारो हुन्थ्यो । त्यसबेला सबैका भकारी धान र कोदोले पुटुक्क भरिएका हुन्थे । मकैको खातले आँटी लतक्क हुन्थ्यो । गेढागुढीले तामाका गाग्री, निगालोका थुन्से, डाला, सोली भरिएका हुन्थे ।
मानिसको ओहोर–दोहोर हुन्थ्यो । परालको टौवा हेरेर छोरी दिने कुरा चल्थ्यो । बिहेवारी, कुलपूजा, वर्षाको लागि कडकुरामा दाउरा चिन्ने, नाम्लो–डोरी बाट्ने, हलोजुवा ताछने, नारा बटार्ने, चोया, बाता र भाटा काट्ने, खरले घर छाउने, चोरखर लाउने काम हिउँदमा गर्थे । महिलाहरुले गुन्द्री बुन्ने, मस्यौरा पार्ने, ढिकी कुट्ने, जाँतो पिस्ने, गेडागुढी सुकाउने थन्क्याउने गर्थे । वर्षाको जोहो हिउँदमा हुन्थ्यो । सबै वmुरा तयारी गर्दै नयाँ घरजमको ब्यवस्था गरी हिउँद वित्दथ्यो । धवलागिरी, नीलगिरी हिमालमा हिउँदमा जमेको हिउँ पग्लेर कालीगण्डकी धमिलो हुन थाले पछि किसानले मौसममा आएको परिवर्ततको हेक्का राख्थे ।
‘विउ कुह्यो, काफल पाक्यो, कुहुकुहु’ जस्तो आवाज निकाली चरा कराउन थालेपछि किसानको काममा फेरि परिवर्तन देखिन थाल्थ्यो । किसानी जीवन बढो उल्लासमय ढंगले पूर्तीघाटबाट कालीगण्डकी सेतीवेनी, रिणी, देवघाट, गजेन्द्रमोक्ष त्रीवेणीधामतिर बगेझैँ निरन्तर बगेको थियो । त्यहाँ भित्र हरेक घरमा आफनै कथा, ब्यथा, हर्ष–विस्मात, जन्म, मृत्युका कथा विहादीको ऋतुसँगै परिवर्तन भइनै रहन्थ्यो । त्यसभेगमा बसोबास गर्ने बाहुन, क्षेत्री, गुरुङ, मगर, ठकुरी, नेवार, थकाली, माझी, पेशागत जाती सबै एउटै परिवार जस्तै भएर बस्दथे । साउने संक्राती, हिले जात्रा, कृष्णाष्टमी, तीज, दशैँ, तिहार, ठूली एकादशी आदिमा सबै भेला भएर इमिचौर, घुमाउने र सेतीबेनीमा मेला गर्थे । त्यो नै त्यहाँका बासिन्दाको वर्षभरको मनोरञ्जनको माध्यम थियो ।
अब म आफैलाई पत्यार नलाग्ने एउटा घटनामा केन्द्रित हुन खोज्दैछु । मानिसको स्वभाव, प्रकृति, चरित्र, प्रबृत्तिमा आउने क्षणिक परिवर्तनले कुनै बेला जीवनभर प्रभाव पार्ने घटना घट्न सक्छ । मानिसले स्वर स्वरैमा, लहलहैमा आफ्नो बानी ब्यहोराभन्दा फरक घटना घटाई जीवनभर छाप रहने क्रियाकलापमा सहभागी हुन पुग्छ । कति घटनाले त दुर्घटना पनि ल्याउछन्, कतिले जीवनका मोडमा बाटो परिवर्तन गरिदिन्छन्, कतिले नातासम्बन्धमा चीरा पार्छन, कतिले लगनशिल हुन, गल्ति नदोहो¥याउन प्रेरित गर्छन् । म त्यस्तै अपत्यारिलो घटनामा परेको छु । म त्यसबेला स्कुलको अनुशासित, लगनशिल, इमानदार र पढाइमा दत्तचित्त हुने विद्यार्थीको कोटीमा पर्थे, पुरस्कार थाप्थेँ । आमाबाले जसरी मबाट अपेक्षा गर्दथे, त्यसैगरी गुरुहरुको पनि भरोषाको पात्र थिएँ । तर, एक दिन मैले जीवनभर सम्झना भईरहने, पश्याताप गर्नु पर्ने उच्छृङखल काम गरेको छु । मुल रुपमा यो संस्मरण त्यसैबाट सिर्जीएको हो ।
पुसमा हिउँ परेकाले माघ महिनाको शुरुमा बिहादीमा पनि असाध्यै चीसो थियो । गोल्र्याङ, लुरीङकोट, कालीपार गुल्मीका अग्ला डाडामा हिउँ देखिएकै थियो । हिउँपरे पछिको आकाश भने गाढा नीलो थियो । चीलले धेरै माथि आकाशमा कावा खाएको देखिन्थ्यो । कालीपारका पहाडले नीलो आकाशलाई गर्लम्म अँगालोमा बाँधेका थिए –मानौ कि, तिनीहरु ढुकुर जोडी थिए र प्रेमिल क्रिडामा मग्न थिए । सिरसिर बतास चलीरहने हाम्रो उन्युले बारेको स्कुल भएको माझीगाउँको चौरमा माघको सफा दिनमा लागेको घाम अन्यत्रभन्दा प्यारो हुने नै भयो । माछापुच्छ«े र हिउँचुलीको चीसो हवा स्कुलको चौरमा कालीको तीर हुदै सहजै आउथ्यो । संस्कृत पढेका र पढाउनेलाई गुरु र अन्य विषय पढेका र पढाउनेलाई सर भन्ने गरिन्थ्यो । पचास पुर्णाङकको संस्कृत परमानन्द पराजुली गुरुले पढाउनु हुन्थ्यो ।
माघ महिनाको घमाईलो त्यो दिन परमानन्द गुरुले संस्कृत पढाउन कक्षामा प्रवेश गर्नु भयो । वहाँले राम्रोसँग पढाउनु हन्थ्यो, पढाए पछि ‘पाठ कण्ठ गर’ भन्दै कुर्चीमा बस्नु हुन्थ्यो । कुर्चीमा बस्ना साथ उँघ्ने गुरुको बानी थियो । त्यती कुरा पाए पछि विद्यार्थीले उचक्याई गर्ने नै भए । त्यो कक्षा संस्कृत भएकाले कठीन थियो । गुरुको नरम स्वभावको फाइदा उठाउन खोज्दा विद्यार्थी संस्कृतमानै फेल हुन्थे । गुरुको झकाउने बानीलाई मनोरञ्जनको माध्यम बनाइन्थ्यो–मात्र गुरुचेलाको सम्बन्धको आधारमा । गुरुले पाठ नबुझाउनेलाई हत्तपत्त पिटनु हुन्नथ्यो छडी हातमा भए तापनि ।
त्यो दिन पाठ पढाई सके पछि कुलबहादुरलाई कक्षाको कुर्ची कोठाभन्दा १० फिट टाढा चौरको छेउमा राख्न भन्नु भयो । हामीलाई पाठ कण्ठ गर्न भनेर तीन बित्ताको छडी हातमै लिएर कुर्चीमा बस्नु भयो । बानी अनुसार माघको त्यो स्वादिलो न्यानो प्यारो पाहारमा कुर्चीमा बस्ना साथ कुर्चीको माथिल्लो डिलमा टाउको अड्यार निदाउनु भयो, र घुर्न थाल्नु भयो । हातबाट छडी खसेको पनि थाह पाउनु भएन । उटक्या विद्यार्थीको लागि गुरुलाई जिस्क्याउन र गिज्याउन त्यो भन्दा राम्रो अवसर अर्को थिएन । त्यस्तैमा कुलबहादुरले कक्षा कोठाको उन्युको भित्तोबाट चार–पाँच अँगुल लामो सुकेको उन्युको तीखो छेस्को मेरो हातमा दिदै ‘जा गएर गुरुको नाकमा घोच र दौडिदै आएर बेन्चमा बस् । गुरु निदाउनु भएको छ, थाह पाउनु हुन्न ।’ भने । उनको प्रस्ताब सुन्ना साथ म तर्सदै भने –‘धत ! त्यस्तो पनि गर्न हुन्छ ? गुरुले मलाई स्कुलबाट निस्कासन गर्नु हुन्छ । म घोच्दिनँ ।’
‘तँ अगाडिको बेञ्चमा छस्, घोचेर आएर बस् । तँलाई गुरुले शंकै गर्नुहुन्न ।’ पछाडीको बेञ्चबाट लालबहादुर ले उकासे । नरवहादुर, टिकाराम सबैले ‘फष्ट ब्वाईले घोचेको भनेर गुरुले विश्वास गर्नु हुन्न । हामीले भन्दैनौं ।’ भन्दै गुरुको नाक घोच्ने अभद्रकाम गर्न मलाई नै उकासे । एक दुई गर्दागर्दै म पनि हौसिएँ । आँट गर्ने भएँ । गुरुले माघेघामको स्वाद मज्जाले लिइरहनु भएको थियो ।
काँचो दोब्रिन्छ भने, सुकेको उन्यूको छेस्को फलामको सुइरो जस्तै तीखो र छाला छेडने गरी घातक हुन्छ । त्यसले झुक्किएर छ्वास्स घोच्दा पनि मानिसको बाहिरी छाला सजिलै छेड्छ । बनबाट उन्यु बोकेर ल्याउदा हाम्रा पाखुरा र फिला रगताम्मे हुन्थे । साथीहरुको हौस्याइले मैले आँट गरेँ । आनन्दसँग घाम तापेका गुरुको नाक घोच्न उन्यूको सुकेको छेस्को लिएर हिंडेँ । अनुशासित विद्यार्थी भनेर पुरस्कार थापेको, कक्षामा प्रथम हुने, लगनशील र मेहनती भनेर सबैले प्रशंसा गरेको कुरालाई चटक्कै बिर्सेर म त्यस्तो उच्छृङ्खल काम गर्न हिंडे, त्यसबाट हुने परिणामलाई ख्याल गरिनँ ।
माघे घामको प्रचुर स्वादलिदै शरिरलाई कुर्चीको माथिल्लो भागमा अड्याएर गुरु नीद्रादेवीसँग वार्तालापमा हुनुहुन्थ्यो । मेरो बदमासी आँट अनुसार उन्युको छेस्कोले गुरुको नाक भित्र घोचेर हाम फाल्दै कोठामा छिरेँ । साथीहरुले भने जस्तो भएन । म बेञ्चमा बस्नुभन्दा पहिलेनै गुरुले मलाई देख्नु भयो । गुरुको नाकबाट रगत बग्यो । रुमालले नाक पुछ्दै, ‘ तँ पनि मात्न थालिस् हैन ? अब पढ्लास् यो स्कुलमा । ’ भन्दै तीन बित्ते छडीले कस्सेर कुट्नु भयो । त्यसपछि मेरो देव्रे कानको लोतीलाई बटार्दै शास्त्री गुरुकोमा लैजानुभयो । अरु कक्षाका साथीहरुले पनि मलाई देखे । सबै कक्षामा खासखुस भै हाल्यो ।
रुमालले रगत पुछ्दै मैले गरेको बदमासी बताउनु भयो । ‘फष्ट ब्वाईको काम यहीँ हो ? बदमास् ! तँलाई स्कुलबाट हटाउन प¥यो, हैन ?’ भन्दै शास्त्री गुरुले पनि स्वाँठ हान्नु भयो । शास्त्री गुरुको ‘तँलाई स्कुलबाट हटाउन प¥यो, हैन ?’ भन्ने वाक्य र परमानन्द गुरुले ‘अब पढ्लास !’ भनेर गाली गर्नु भएको सात शब्दले मलाई जति दुख्यो त्यसको एक छेउ पनि छडीको स्वाँठले दुखेको थिएन । मैले अब ‘पढन नपाउने भए, स्कुलबाट निकालिने भएँ’ भन्ने तिरनै मेरो सोँचाई पुग्यो । त्यसले म मर्माहत भएँ, आँशु रोक्न सकिनँ ।
घण्टी लाग्यो । अरु कक्षाबाट सरहरु आउनु भयो । विद्यार्थीहरुले गुरुको कोठामा चियाएर हेर्न थाले । मेरो उच्छृङ्खल चर्तीकलाले वातावरण स्तब्ध भयो । मैले गरेको बदमासी बारे बहस भयो । शास्त्री गुरुले सबै विद्यर्थीलाई हकार्दै आआफ्नो कोठामा जान भन्नु भयो । परमानन्द गुरुसँगै अन्य केहि सर हुनुहुन्थ्यो । ‘यसलाई कडा सजाय दिन पर्छ । यसले अनुशासन तोडेको छ’ हेड सरको भनाई थियो ।
‘यसले आफ्नो बुद्धिले गरेको होईन । यो उक्साहटमा लाग्यो । सामान्य सजाय दिएर सचेत पारौँ र छोडौँ ’ परमानन्द गुरुले वातावरणलाई शान्तपार्दै भन्नु भयो । केहि समय बहस भयो । गुरुहरुले म प्रति गरेको अपेक्षाको पनि चर्चा भयो । ‘एक पटकलाई शारिरिक सजाय दिई माफ गर्ने, तर दोस्रो पटक त्यस्तो बदमासी गरेमा स्कुलबाट निस्कासन गर्ने’ शास्त्री गुरुले निर्णय सुनाउनु भयो । त्यस पछि ‘कान समातेर ५० पटक उठबस गर ।’ भन्नु भयो । आँशु झार्दै पचास पटक कष्टसाथ उठबस गरेँ । कोठामा गएँ । कक्षामा भएका सबै साथीहरुको अनुहार मलिन देखिएको थियो । लालबहादुर र अन्य साथीहरुले ‘हामीले गर्दा सजाय पाईस । हामीसँग नरिसा है । अबदेखि हामी कसैले पनि त्यस्तो नगर्ने’ भनेर कसम खाए । मेरा आँखाबाट आँशु नरोकिए तापनि निस्कासनमा नपरेकोमा भित्रै देखि म खुशि भएँ ।
समय र परिवेशमा त्यस्ता गल्ति हुन्छन् । जीवनमा गल्ति भइनै रहन्छन् । त्यस्तैबाट पाठ सिक्दै गल्ति नदोहो¥याउनु आफुलाई सुधार्नु हो । त्यसपछि मैले त्यस्तो उपद्रो कहिल्यै गरिनँ । त्यो दिन पछि धेरै महिना मैले गुरुलाई ठाडो शिर गरेर हेर्न सकिनँ । गुरुको म प्रतिको ब्यवहारमा भने कुनै परिवर्तन आएको थिएन, मलाई पहिले सरहनै माया गर्नुहुन्थ्यो । ‘पढाईमा ध्यान देउ, स्कुलको इज्जत तिम्रो हातमा छ । तिमिले पहिलो पटकमानै एसएलसी दोस्रो श्रेणीमा पास गर्नु पर्छ । ’ भन्दै उत्साह थप्नु हुन्थ्यो । मैले गुरुको आर्शिवचनलाई पुर्ण रुपमा पालन गरेँ । पहिलो पटकमानै पास गरेँ । एसएलसी पास गरे पछि परमानन्द गुरुको घरमा गएर ढोँग गरेँ र फेरि माफि मागेँ ।
‘मैले त्यो घटना बिर्सेँ । हामीलाई कति विद्यार्थीले कहिले के गरे भन्ने सम्झना कहाँ हुन्छ र ? विद्यार्थी त हाम्रा सन्तती हुन् भने देशका सम्पत्ति । तिमी अध्ययनशिल छौ । पढन सक्छौ । बुबाले पढाउन पनि सक्नु हुन्छ । तिमी पोखरा वा पाल्पा गएर वि.ए.सम्म पढ । त्यसपछि मैले तिमीलाई पुरै माफी दिनेछु ।’ मैले गुरुसँग पुरानो कुरा उक्काएर माफमाग्दा त्यसो भन्नु भयो । मनभरी पाल्पा र पोखराका सपना बोकेर घर गएँ । नौ कक्षामा पढदा एक पटक पाल्पा पुगेर पहिलो पटक मोटर देखेको हुँ मैले ।
आर्थिक कारणले पोखरा र पाल्पा जाने सपना विपना हुन सकेन । सामान्य किसान परिवारको लागि त्यो कठीन थियो । भाईले पढन बाँकी थियो । त्यसैले, म भारतको उत्तरपूर्व वर्मा सिमा नजिक रहेको मिजौराम जहाँ मेरो काका हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ पुगेँ । सेनामा भर्तीहुने प्रस्ताब स्वीकार गरीनँ । मैले कनीकुथी गरी नर्थ इष्टर्न हिल्स युनिभर्सिटि अन्तरगतको पाछुङ्गा कलेजमा भर्ना भएँ । त्यहाँबाट वि.ए. पास गरेर नेपाल फर्केँ ।
त्यसबेला गुरु बाच्छामा पढाउनु हुदो रहेछ । त्यहाँ पुगेँ । वि.ए. पास गरेको प्रमाणपत्र गुरुको हातमा राख्दै ‘ गुरु मैले वि.ए पास गरेँ । मेरो तर्फबाट हजुरकोलागि गुरु दक्षीणा यहीं प्रमाणपत्र हो । गुरु मलाई माफ गरिदिनु होस।’ भनेँ । त्यसबेला गुरु भावुक हुनुभयो । मेरा आँखाबाट पनि आँशु खसे । तत्कालै गुरुले मलाई अँगालो हाल्नु भयो । अनि, दुवै हात मेरा दुवै कुममा राखेर भन्नु भयो – ‘ मैले त्यहीँ दिन स्कूलमानै माफ गरेको हुँ । वि.ए. पास ग¥यौँ । म हर्षित भएँ । अब पनि तिमी गाउँमा नभुल । काठमाडौँ जाउ र एम.ए. गर ।’
गुरुले मलाई फेरि अर्को जिम्मेवारी सहितको आशिर्वादको थैली मेरो अँजुली भरी राखिदिनु भयो । त्यहीँ थैलीलाई मनमन्दिरमा राखेर म काठमाडौँ छिरेँ, २०३९ फागुनमा । मैले विश्वविद्यालयबाट उच्च शिक्षा लिएको कुरा पनि गुरुलाई जानकारी दिएँ । त्यसपछि धेरै पटक हाम्रो भेट भयो । गुरु म देखि प्रसन्न हुनुहुन्छ । वहाँको आशिर्वादले मैले जीवनको गोरेटोमा पाईला चाल्ने साहस बटुलेँ । गुरुप्रति म ऋणीनै छु । जिम्मेवार र इमान्दार हुन सकेमात्र गुरुको ऋण तीर्न सकिन्छ, त्यसको मुल्याङ्कन इतिहासले गर्ने हो । यसै संस्मरणमार्फत नवलपरासीको गैंडाकोटमा रहनुभएका मेरा आदरणीय गुरुको सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको कामना गर्दै यो संस्मरणबाट बिदा हुन्छु ।